Ady amin’ny haintany:NANOLOTRA VOLA 16,9 TAPITRISA LIVRE STERLING NY ROYAUME-UNI -
AccueilVaovao SamihafaAdy amin’ny haintany:NANOLOTRA VOLA 16,9 TAPITRISA LIVRE STERLING NY ROYAUME-UNI
Manatona ny vanim-potoanan’ny maitso ahitra ireo firenena Afrika atsimo amin’izao fotoana izao, vokatry ny haintany mahery vaika nateraky ny tranga El-Nino nandritra ny amam-polo-taona maro. Ary amin’izao ankatoky ny fahatongavan’ny taona 2017 izao, olona maherin’ny 37 tapitrisa aty Afrika atsimo no mbola tsy manan-kohanina. Mba hisorohana izany mialoha, noho izany, nanome famatsiam-bola mitentina 16,9 tapitrisa Livre sterling (20,8 tapitrisa dolara) ny DFID (Département du développement international) avy any Royaume-Uni. Fanampiana izay tafiditra amin’ny fanoherana ny fitomboan’ny krizy amin’ny alalan’ny famatsiana sakafo, rano ary fialofana ho fanampiana ny ady ataon’ny governemanta malagasy amin’ny fanafoanana ny tsy fanjarian-tsakafo. Tsiahivina hatrany fa ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo dia laharam-pahamehana eo amin’ny fitondram-panjakana. Ary efa maro ny asa natao sy mbola hatao miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka sy ireo mpisehatra amin’ity asa ity entina hanafoanana izany. Ho an’i Madagasikara manokana moa dia vola mihoatra ny 3 tapitrisa livre sterling no hanampian’ny DFID ny asan’ny Unicef sy mpiara-miombon’antoka aminy ny filana ara-tsakafo, ara-drano ary ny fanamafisana ny rafitry ny fahasalamana ho an’ireo zaza iharan’ny haintany any amin’ ny distrikan’i Betioky, Ampanihy Andrefana, Beloha, Tsihombe, Ambovombe-Androy, Bekily, Amboasary Atsimo, Taolagnaro ary haharitra hatramin’ny Novambra 2017 izany.
Tsikaritra ihany koa fa tonga amin’ny fotoana naha betsaka ireo ankizy tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo, ny tsy fahampian’ny fahafahana mahazo rano fisotro madio izao fanampiana amin’ny DFID izao, izay mikendry indrindra ny famonjena aina amin’ny fisorohana ny fihanaky ny tsy fahampian-tsakafo, ny aretina, ny fahafatesan’ny zaza eto Madagasikara, any Malawi, Mozambique ary Zimbabwe araka ny fanambaran’ny Unicef (Fonds des nations unies pour l’enfance). Ireto firenena efatra ireto izay ahitana ireo tranga voalaza etsy aloha. Tsy izay ihany fa hahafahana manome fiofanana olona hatramin’ny 3,25 tapitrisa momba ny tsara fanao eo amin’ny lafiny ara-sakafo, rano, fahadiovana ary eo amin’ny fisorohana ny VIH sy ny aretina ity fanampiana ity. « Noho ny fahitana ireo zaza marefo sy ireo fianakaviana hiditra ny vanim-potoana maitso ahitra izao, tena zava-dehibe ity vola ity ho fanampiana azy ireo mba hiatrehana ny fiantraikan’ity tranga mitaiza ireo firenena aty Afrika atsimo. Mankasitraka lehibe ny DFID amin’ny finiavany manampy lehibe ireo lasibatra ny haintany amin’ny fanomezana hery azy ireo hanohitra be be kokoa ny krizin’ny toetr’andro mateti-pitranga izay lalovana”, hoy i Leila Gharagozloo-Pakkala, talem-paritra ny Unicef any Afrika Atsinanana sy Afrika Atsimo.